Machining & Turning Zvikamu Sevhisi | Ningbo Daohong Machine Co., Ltd.
Daohong Precision anoshandisa akakwira CNC lathes kuburitsa akatendeuka zvikamu uye zvinoriumba zvemarudzi ese. Isu tinoshanda kubva kune vatengi dhizaini kuburitsa yakakwira chaiyo yakashandurwa zvikamu zvinosangana nezvinodiwa chaizvo. Kubva pane zvidimbu zvakapusa kusvika kune zvakanyanyisa, tinogona kununura chero chero chikamu chakatendeuka chaunofungidzira.
Zvidiki kusvika Pakati Pakati Zvakatendeuka Zvikamu zveZvivakwa Zvese & Zvishandiso
Iine akawanda-axis lathes uye mamiriro-e-iyo-iyo dhizaini dhizaini, yedu iri-mumba lathe dhipatimendi inogona kuburitsa yakashandurwa mativi kuti aenderane chero magadzirirwo. Tinogona kupa zvikamu zvakachinjika nemadimimendi zvidiki se1 / 16 "kusvika gumi" kana kupfuura. CNC tekinoroji inotigonesa kunyatso shandura akaomarara akaomarara ejometri uye kubata kushivirira kwe ± 0.0005 ”kana zvirinani
Zvikamu zvakashandurwa zvinoshandiswa mumaindasitiri asingaverengeke uye kunyorera.
Machining edu ekugona anosanganisira Swiss-maitiro otomatiki machining ane 15,000 RPM spindles ayo anowana tolerances seyakaomarara se ± 0.0005 ″, akasiyana-siyana akawanda-chishandiso 4-axis CNC yekugaya uye yekushandurwa nzvimbo, CNC lathes ine mhenyu tooling inokwanisa kushanda kune madimita madiki se0.010. ", Uye 4-Axis CNC waya EDM michina inoshanda kune madimeter kunge madiki se00005 ″. Yakasanganiswa nekucheka kwedu, kukuya, kurova-rova nekukorobha, masimba edu ekugadzirisa zvinhu anotigonesa kupa mhinduro dzakagadziridzwa dzinopfupisa nguva dzekugadzira idzo dzakaomarara kumuchina zvidimbu zvehupamhi.